Myanmar Digital Innovation & Development Event Series3– Impact Hub Yangon
Myanmar Digital Innovation & Development Event Series 3
October 26, 2019 | 10:00 am - 4:00 pm
« Fuck Up Nights: volume 14
Agriculture Forum 2019 »
Myanmar Digital Innovation and Development Event Series 3
<Burmese Version Below>
(DESIGN THINKING CONCEPT)
We would like to cordially invite you to our second event of the digital innovation and development event series that is run by the Friedrich Naumann Foundation Myanmar (FNF Myanmar) and Impact Hub Yangon. This event series aims to identify various kinds of digital businesses that are established in Myanmar, throughaseries of networking and workshop events and to createadigital dialog platform to raise awareness about the development of digital economy and digital innovations in Myanmar.
This second event isaworkshop style event to work on the challenges that we have identified from previous event and relevant references. By using design thinking methodology, we will co-work on understanding and prioritizing the needs in myanmar digital sector. Then, examine the opportunities to innovate the solutions in the later stage. The relevant industrial experts from both private and public sectors, will discuss, share and work together on the topic with the audience who are startups & investors.
Taking part in this event from the start will enable you to:
Turn your challenges and needs into new opportunities
Learnadesign thinking methodology
Haveachance to advocate the public sector people focuses on digital sector
Get to know the current digital policies and regulations and the future plans
Learn from relevant best practices from other startups and experts
Meet the ecosystem players
Network, build new partnerships and get inspired
❖ Welcome & Registration Keynote from FnF Myanmar
❖ Event Introduction & Agenda Overview
❖ Opening Speech from FnF Myanmar
❖ Presentation on previous workshop outcomes, Defining Challenges & explaining design thinking method
❖ Understand & Prioritize the needs on Digital Sector using design thinking method
❖ Examine the opportunities on Digital Sector using design thinking method
❖ Coffee Break
❖ Next Event(Innovate the solutions) & Networking
❖ END of Program
No 40 Natmauk Road, Tamwe Township, Yangon, 11211
Please Register Here – http://bit.ly/MMDIES2
We will send you an email to confirm your attendance.
မြန်မာနိုင်ငံဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယပွဲစဉ်
Impact Hub Yangon နှင့် Friedrich Naumann Foundation Myanmar (FNF Myanmar) တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပပြုလုပ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ၏ ဒုတိယပွဲစဉ်သို့ တက်ရောက်ပါဝင်ပါရန် လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ အထက်ပါဆွေးနွေးပွဲဒုတိယပွဲစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင် အားကောင်းသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကြောင်းကိုပါ ပိုမိုသိရှိနားလည်လာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယပွဲစဉ်သည် ယခင်ပွဲစဉ်၌ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရှိမူဝါဒနှင့် ဂေဟစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးမည့် ပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် မြန်မာဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာကဏ္ဍတွင် လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် အတူတကွပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နောင် လက်တွေ့အသုံးချသောအခါ ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို လေ့လာသုံးသပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများပြည်သူကဏ္ဍနှစ်ခုစလုံးမှ သက်ဆိုင်ရာ စက်မှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တက်ရောက်၍ လုပ်ငန်းစတင်လုပ်ကိုင်နေသောသူများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစသည့် ပွဲတက်ရောက်လာသော ပရိသတ်များနှင့်အတူ အထက်ပါ မြန်မာနိုင်ငံဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း ခေါင်းစဉ်အပေါ် အတွေ့အကြုံနှင့် သုံးသပ်ချက်များဝေမျှ၍ အတူတကွ ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အတွက် မည်သည့်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်မည်လဲ?
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် ၀င်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် :
• မိမိလုပ်ငန်း၏ စိန်ခေါ်မှုများ နှင့် လိုအပ်ချက်များကို အခွင့်အလမ်းကောင်းများသို့ ဦးတည်စေခြင်း။
• ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစနစ်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်ခြင်း။
• ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် အာရုံစိုက်မှုများ ရှိလာစေရန် ညွှန်ပြပြောဆိုနိုင်သော အခွင့်အရေးရရှိစေခြင်း။
• နည်းပညာလောက၏ လက်ရှိပေါ်လစီများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ရှေ့လျှောက်ပြုလုပ်မည့်အစီအစဉ်များကို သိခွင့်ရခြင်း။
• အခြားသော နည်းပညာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်သူများမှ သက်ဆိုင်ရာ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်း။
• မိမိလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ပေးနိုင်သော ရင်းနီးမြုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း။
• မိမိလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည့်အပြင် အကျိုးတူပူးပေါင်းသူများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်း။
* ဖိတ်ကြားလွှာနှင့် ဆွေးနွေးပွဲသို့ ဖိတ်ကြားခံရသူများကိုသာ တက်ရောက်ခွင့်ပြုပါသည်*
• ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများအား စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့် FNFM မှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခြင်း
• အခမ်းအနား စတင်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ်ကြေငြာခြင်း
• FnFM မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း
• ယခင်ဆွေးနွေးပွဲတွင် ရရှိခဲ့သော ရလာဒ်များအား တင်ပြခြင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများအား အဓိပ္ပါယ်ဖော်ညွှန်းခြင်းနှင့် ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစနစ်အား ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း
• ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစနစ်အားအသုံးပြု၍ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကဏ္ဍ၏ လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေးသတ်မှတ်ခြင်း
• နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ခြင်း
• ဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နည်းစနစ်အား အသုံးပြု၍ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကဏ္ဍမှ အခွင့်အလမ်းများကို လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း
• ကော်ဖီ သုံးဆောင်ခြင်း
• နောက်ထပ်ပြုလုပ်မည့်လမ်းစဉ်များအားဆွေးနွေးပြောကြားခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲအား အပြီးသတ်ခြင်း နှင့် တွေ့ဆုံဖလှယ်ပွဲအစီအစဉ်
• ဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ် ပြီးဆုံးခြင်း
နေ့ရက် – ၂၀၁၉ October 26 ရက်နေ့
ကြာချိန် – 10:00 am to 4:00 pm
နေရာ – Chatrium Hotel Royal Lake Yangon
ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Myanmar Digital Innovation Series